Terry oo banaanka soo dhigay taageerada uu u hayo De Matteo. - Caasimada Online
Home Warar Terry oo banaanka soo dhigay taageerada uu u hayo De Matteo.
Terry oo banaanka soo dhigay taageerada uu u hayo De Matteo.
Rafa Benitez ayaa mar kale la kulmaya taageero la’aan kaga timaada Kabtanka Chelsea John Terry, ka dib markii la arkay inuu 31 jirkaani ku tababaranaayey Number-kii uu kooxda u xiran jiray Roberto De Matteo.
Macalinka reer Spain ayaa jawi soo dhoweyn ah kala kulmin Stamford Bridge, kulankii axada ay kooxdiisu la ciyaartay Man City, waxaa uu John Terry sameeyey dareenkiisa shaqsi ahaaneed sida uu uga murugsan yahay ceyrintii Roberto Di Matteo, kaasoo kooxda sanadkii hore ku hugaamiyey Champions League iyo FA Cup.
Daafacaan, ayaa kasoo kabsanaaya dhaawac jilibka ah, wuxuuna inta badan kooxda u xirtaa Number-ka 26aad, balse wuxuu tababarka ku qaatay Noumber-ka 16aad, waxaana horay u xiran jiray Di Matteo intii uu Blues u ciyaari jiray.